डोल्पा सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन ५ सय मिटर बाँकी ! – Everest Dainik – News from Nepal
डोल्पा सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन ५ सय मिटर बाँकी !
डोल्पाको सदरमुकाम दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन पाँच सय मिटर मात्र बाँकी छ । डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । सेना तथा स्थानीयवासीले सडकलार्इ दुनै पु-याउन तरपरे भिरमा अन्तिम कसरत् गरिरहेका छन् ।
जाजरकोटको पासगाडदेखि डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म एक सय १७ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ । ०७३ साउनमा रुकुम र डोल्पाको सिमानामा पर्ने त्रिवेणी बजारमा गाडी पुगेपछि डोल्पालाई सडक सञ्जालले छोएको थियो । त्यसयता दुनै पु¥याउन नेपाली सेना अन्तिम संघर्ष गरिरहेको छ ।
अहिले त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामै पर्ने तरपरे भिरमा काम भइरहेको छ । यो भिर छिचोलेपछि कालिकोट–डोल्पा सडकको अप्ठ्यारो काम सकिने छ । यसअघि खदाङ–त्रिपुराकोट खण्डकै चिप्ले, श्रीबिन्डे, फोईल, मनमई, काला पहाड, तल्नु, कुच्ची र ऐरी बथानलगायतका भिरहरूमा गाडी गुड्ने सक्ने सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएकाे छ ।
डोल्पालीकाे सपना पूरा हुन अब धेरै दिन बाँकी नरहेको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, दशै‌मा गाडी चढेरै सदरमुकाम दुनै पुग्ने तयारी स्वरुप निर्माण कार्यलार्इ तीव्र पारिएकाे छ । वर्षाै‌काे सपना पूरा हुन लागेकाेमा डाेल्पालीहरु हाैसिएका छन् ।
ट्याग्स: Dolpa Road